Kacdoonada dadweynaha ee Georgia, Ukraine Tajikistan, iyo Ecuador: Somaliland maku soo xigtaa?
Sida aynu la wada socono waxa dunida labadan sano ee u dambeeyay ka socday dhacdooyin aan cusbayn, horena uga dhacay dalal dunida ka tirsan, sida wadanka Iraan, laakiin aad hada moodo in ay noqdeen habka kaliya ee dadwaynaha aduunyada ku afgambiyaan xukuumaddaha caadaystay kalitaliska iyo ku tacadiga xuquuqaha bini aadamka.
Habkan oo noqday ka keliya ee lagu keeno is bedel siyaasi ah oo wax ku ool ah waa habka si da salmiga lah loo isticmaalo awoodda dadweynaha oo ah awood aanay is hortaagi karin xukuumad kasta oo lumisay kalsoonidii ay u hayeen shacabkeedu.Waa awooda dadweynaha ‘people’s power’ ta keentay in ay jilbaha u dhacaan xukuuumadahii xooga badnaa ee Georgia, Ukraine Tajikistan, iyo Ecuador.
Xukuumadaha kor ku xusan waxa dhexroor u ahaa ku tacadiga xuquuqda aadamaha, musuq baahay, shaqo la’aan xad dhaaf ah iyo ku tagri fal awoodeed oo intuba maanta ka noqday wax iska caadi ah dalkeenan somaliland ee ay u soo shahiideen kumanaanka qof,kumanaan kalana u soo dhaawacmeen , halka kumanaan kale ay kaga burburtay maalkoodii iyo hantidoodii qaaliga ahayd.
Hadaba inaga oo maskaxda ku hayna qaabka ay ku timi xukuumada uu ka taliyo Daahir Riyaale oo ahaa mid lagu boobay codadkii dadweynaha, laguna maroorsaday sharciyadii doorashada, bal aynu wax yar ka iftiimino falalkii ay ku kacday xukuumadaa Daahir Riyaale muddadii ay talada wadanka gacanta ku haysay :
1. Waqcadii safarkii laascaanood ee looga dan lahaa in wadanka lagaga gooyo gobolka Sool, taas oo uu ku guulaystay Madaxweyne Riyaale.
2. Safarkii ugu horeeyay ee uu Jabuuti ina Riyaale ku tagay markii uu awoodda dalka la wareegay ka dib geeridii madaxwayne Cigaale, safarkaas oo sababay xidhiidhka meesha ka baxay ee Somaliland iyo wadanka Ethiopa , laguna soo qorsheeyey bilowga duminta jiritaanka iyo qarannimada Somaliland.
3. Xukuumadii ugu tayada xumayd , uguna tiradad badnayd ee soo marta Somaliland ka dib intii ay la soo noqortay madax banaanideeda, xukuumadaas oo sababtay ceelka ay Somaliland maanta ku dhacday.
4. Ku tacadiga xuquuqaha muwaadiniinta iyo u taxaabidii xabsiga ee Boqor Cismaan buur madow, argagixisadii iyo xabsigii wariye Xassan Siciid iyo xadhigii ugu dambeeyay ee boqor Raabi Jilaal.
5. Ku tacadigii iyo xadhigii Samsam Axmed Ducaale iyo fadaxeexadii iyo magic xumadii ay dhaxal siisay dhamaan shacabka reer Somaliland iyo saameyntii xumayd ee ay ku yeelatay sumcada dibeda ee qaranka.
6. Weerarkii axmaqnimada ahaa ee lagu weeraray xarunta xisbiga mucaaradka ah ee Kulmiye iyaga oo raadinayay waa sida ay u dhigeene “lipton’ ay ku jirto idaaacadda madaxa banaan ee ‘Radio Horyaal’.
7. Is hortaagii uu ina Riyaale ku sameeyay magacaabidii Maxamed Xaashi ee guddida doorashooyinka qaranka iyo taakooyinka aan dhamaadka lahayn ee uu u dhigayo xeerka doorashooyinka baarlamaanka.
8. Dilkii badheedhka ahaa ee muwaadiniinta reer Somaliland ay ciidanka boolisku ugu gaysteen magaaladda Hargeisa.
9. Is hortaagii Doodii caqlikeen iyo sharciyad ka qaadkii maxadkii uu ka madaxdda ahaa aqoonyahanka iyo halgamaaga wayn ee Dr. Bulxan.
Falalkaa kor xusan oo dhami waxa ay noqdeen qaar ay caadaysatay xukuumadda ina Riyaale, falakaas oo keeni doona kacdoon dadweyne oo awoodda lagaga qaado ina Riyaale iyo inta ku xeeran ee kula shuraakoobay burburinta qaranimadda Somaliland.
Xukuumadda ina Riyaale kama awood badna, kamana difaac iyo qalcado adka xukuumadahii ka jiray Georgia, Ukraine, Tajakistan and Ecaudor. Xaqiiqadu waxa ay tahay in uu ina Riyaale ka taliyo caasimada Hargeisa oo kaliya, aadna ay u fududahay sidii loo soo gabogabeyn lahaa nidaamkan kalitaliska curdinka ah iyo xaaladahan madow ee soo foodsaartay qaranimadii Somaliland.
Xaqiiqadu waxa ay tahay in Ina riyaale iyo afarta ku xeeran ee ay ugu horeeyaan Qaybe, Cawil, Cabdilaahi Mohamed duale, iyo Ismaaciil Joomitir ay go’doon kaga jiraan rayiga dadweynaha, kana dareen la’ yihiin xoogga ku xeeran ee Somalilandta maanta.
Waxa la soo gaadhay waqtigii dadweynahu awooddooda u isticmaali lahaayeen sidii ay isaga dul qaadi lahaayeen nidaamkan qaran dumiska , kartida darada iyo ku tacadiga xuquuqda muwaadiniinta ku sifoobay.Way bilaabantay mawjadii awooda dadwaynahu, waxaanay ka bilaabantay gobabka dooxa Hargeysa ee car yaan daadku hore u qaadin goor aan fogayn ina Riyaale iyo xukuumadiisa taagta daran.
Dayrka madaxtooyaduna ma noqon doono mid ka difaaca ina Riyaale mawjadaha kacdoonka dadweyna ee Salmiga ah, si ay shacabku u soo ceshadaan sharaftooda iyo jiritaankooda qarannimo.Ina Riyaale ha bilaabo in uu ka fikiro wadanka uu magan gelyo siyaasadeed waydiisan doono, hakuna xisaabtamo in safaarad uu kaga galo gadoodka shacbiguna aanay kuba ool Hargeysa, marka laga reebo, laga yaabee, xafiiska xidhiidhka ganacsi ee Ethiopia ee ka dambeeya qasrigiisa Hargeysa.
Ama booqo blogga: